Maitiro Ekubatsira Shamwari Kuburikidza nekurambana (+ Chii Kuti / Kwete Kutaura) - Ukama
Maitiro Ekubatsira Shamwari Kuburikidza nekurambana (+ Chii Kuti / Kwete Kutaura)
Ipfupi yekuenda kuburikidza nekurambana iwe pachako, pane zvishoma zvinhu zvinorwadza sekutarisa imwe yeshamwari dzako dzepamwoyo dzichitambura mushure mekunge hukama hwavo hwapera.
Kurambana hakuna kumbonakidza, asi zvakanyanya kuomarara dai vasiri ivo vaikurudzira kurambana, zvakavatora nekushamisika, zvakapera nekuda kwe kutengesa , kana hukama hwaive nehupfu munzira ipi neipi.
Iwe unovenga kuvaona vari mumamiriro akashata akadaro, asi hauna chokwadi chekuti ungaita sei nezve kuvabatsira kushanda kuburikidza nazvo.
Wese munhu anozozvibata pakurambana zvakasiyana uye anoda mhando dzakasiyana dzekutsigirwa kubva kuvanhu vakavatenderedza.
Izvi zvinotevera gwara rakaomarara rekubatsira mumwe munhu akakosha kwauri panguva yakaoma iyi.
Tichatarisa zvese izvo zvaunogona kuita kubatsira uye zvaunogona kutaura izvo zvinogona kupa nyaradzo ...
… Pamwe nezvisingaitwe uye chii chaunofanira kudzivisa kutaura, sekufunga kwazvinogona kuita kwauri kuti zvinyaradze ivo kurwadziwa kwekurambana .
maitiro ekuita kuti zuva rako rebasa rikurumidze
Zvinhu zvitanhatu zvekuita kana Shamwari Inoenda kuburikidza nekurambana
Ngatitange nezvako iwe, seshamwari yakanaka , Unogona kuita kubatsira mumwe munhu kupfuura kupfuura yakaipisisa yekusagadzikana kwepfungwa.
1. Ingova ipapo.
Mushure mekurambana, pane hombe huru kwazvo muhupenyu hwako.
Vazhinji vedu tinoita nepatinogona napo kwete kuti ive inoenderana nevamwe vedu, asi zvichiri zvisingadzivisike kuti mumwe wako achatora yakawanda nguva yako nesimba.
Kurambana kunogona kukusiya uchinzwa kusurukirwa, kurasikirwa, uye kusagadzikana.
Saka, seshamwari, iwe unofanirwa kuyedza kuve nechokwadi kuti iwe unodzikisira imwe yeiyo kusurukirwa.
Ingozvichengeta ivo kambani kuti vasakwanise kupedza nguva yakareba vari voga nemifungo yavo, vachifunga zvisingaperi pamusoro pezvakakanganisika.
Kudzoka pandakanga ndiri kuyunivhesiti, shamwari yangu yakanaka yakandisheedza nemisodzi neChishanu, ichangobva kuputswa neakakwana kunze kwebhuruu.
Ndakasvetuka rwendo rwemaawa mana nechitima mangwanani akatevera ndikapedza vhiki yevhiki ndinaye, ndichidya, ndichifamba nzendo refu, uye ndichingove.
2. Tora ice cream mukati.
Chokwadi, inyore, asi ndinofunga isu tese tinoziva kuti tubhu raBen naJerry inzira yakanaka kwazvo yekutanga kunyaradza moyo wakaputsika.
Usamirira kubvunzwa. Kana iwe uchigara padhuze, saka munguva pfupi yapfuura yekuparadzana - kunze kwekunge vanyatso kujekesa kuti vanoda kuve vega - rova ​​zvitoro uye utenge zvese zvavanofarira zvekubata, wozozvisimudzira kumusoro kuimba yavo.
Vanogona kusava nehavi yakawanda, sevamwe vanhu vanorasikirwa zvachose nechikafu kana vari panguva yakaoma, asi ndinovimba kuti ruzivo rwenyu rwezvinonaka zvavo zvichareva kuti uchave nechimwe chinhu chekuvaedza nacho.
Kunyangwe kana vakasadya chero chazvo ipapo ipapo, vanozove nacho chemberi apo izvo zvishuwo zvarova, uye vanozokoshesa chiito.
3. Taura zvirongwa.
Pakarepo mushure mekurambana, vangangoda kusada kuenda chero kupi kana kuita chero chinhu, asi iwe unogona achiri kuronga zvirongwa uye edza kuvakurudzira kuti vabude nekufamba.
Usavakoke kunze nenzira inoita kuti vanzwe kunge urikungozviita nekuti unovanzwira tsitsi.
Ingovakoka pamwe chete nezvinhu zvauri kutoita kana kutsvaga zviitiko zvinonakidza zvaunoziva kuti vangazonakidzwa nazvo.
Kana paine kirasi yemanheru yawanga uchitsvaga kutanga kana mutambo waunofunga kuti ungafarire uye iwe uchifunga kuti shamwari yako yaingaidawo, wozokukurudzira sechimwe chinhu chaungaite pamwe chete.
4. Iva wakagadzirira kukwira nekudzika.
Shamwari yako iri kuchema hukama, uye kushungurudzika hakufungidzike.
Vangaratidzika kunge vakanaka mangwana asi voputsa mwedzi unotevera.
Gadzirira kuenda kunotora zvidimbu pese paunenge uchidikanwa, uye usango fungidzira kuti nekuti X nguva yapfuura, vanofanirwa kunge vari pamusoro payo.
Zvinogona kutora mwedzi, kana kuti zvinogona kutora makore.
5. Ronga kupukunyuka.
Kana shamwari yako yakakomberedzwa nezviyeuchidzo zveavo vekare muhupenyu hwavo hwezuva nezuva, kutiza kunogona kunge kuri izvo zvavanoda.
Bhuka kuzorora kwemaminetsi ekupedzisira, kana kungoenda parwendo rwezuva kuguta rinotevera kana kumahombekombe.
Kuwana chinhambwe chemuviri kunogona kuponesa chaiko, kunyangwe kana kuri kwezuva chete.
6. Rongedza shamwari dzako.
Kana imi vaviri muri chikamu cheboka rakakura rehukama, saka inguva yeiyo simba reimba rekutsvaira muchiito.
Iwe haugone kusiya hupenyu hwako hwese nekuda kwekuparadzana kweshamwari yako, saka ndipo panopinda kubatana.
Zvirongere pachako zvisinei zvinoshanda zvakanyanya, asi edza kuve nechokwadi chekuti, pakati penyu, mese muri kuita zvishoma uye kuchengeta shamwari yako yakanaka uye yakabatikana.
Nei Vamwe Vaviri Vakanamatira Mukomberedza YeKudambura Uye Kudzokerana
Veppam Trailer Dailymotion vid Drama Triangle
Maitiro Ekurambana Nemumwe Munhu Pasina Kuvatyisa Kune Hupenyu
Zvinhu zvina ZVISINA KUITWA Kana Ukama Hwe Shamwari Huguma
Zvakawanda sezvaungafunga kuti uri kubatsira, zvakakosha kuti usaendese zvinhu kure zvakanyanya. Saka usaite chero cheizvi zvinhu kuitira kana kushamwari yako.
Kunyangwe zvakakosha kuve nechokwadi kuti havana huwandu hwakawanda hwenguva yemahara yekugara, usatore kure zvakanyanya neimwe nzira, futi.
Chengetedza ivo kambani, asi usanzwe kudiwa kwekugara uchitaura navo nezvekurambana kana kuvabvunza kuti vari kunzwa sei masekondi mashanu ega ega.
Kungovapo kwako kwakwana.
2. Vamanikidze muzvinhu.
Zvakanaka kuva proactive uye nekupa mazano, asi usavaite kuti vanzwe vachisungirwa kuita chero chinhu chavasinganzwe kuda kuita.
Zvichida ichave iri nguva yakati shamwari yako isati yagadzirira kusangana nemumwe munhu mutsva.
Kana ivo vakakumbira seti-kumusoro mumazuva ekutanga, usazviita. Zviri nani kwavari kuti vawane rebound hukama voga.
Kana iwe uine mumwe munhu mupfungwa dzavo, mira kusvikira iwe uine chokwadi chekuti vakagadzirira zvechokwadi kuenda mberi usati wavazivisa vaviri vacho.
4. Fungidzira kuti iwe unoziva zvakanakisa.
Une zvido zvavo pamoyo, asi haunyatso kuziva zviri kuitika mupfungwa dzavo…
… Uye hauzombonzwisisa zvese zvidiki zvehukama.
Zvakanaka kupa maonero, asi usashamisika kana vakaita zvakapesana zvakakwana kune zvaunoraira.
3 Zvinhu Zvokutaura Kune Shamwari Yako
Kunze kwekuvaitira zvinhu, hezvino zvimwe zvinhu zvaunogona kutaura kushamwari yako kuvabatsira kupora kubva pakurambana.
1. Ita kuti vazive kuti unogara uripo.
Shamwari yako inoda kuziva kuti, mudiwa kana pasina waunofambidzana naye, havasi voga munyika.
Vavimbise kuti wawana musana uye hapana kwavanoenda.
2. Ita kuti vazive kuti unovada.
Ivo vanogona kunge vari kunzwa zvinopfuura zvishoma zvisingadiwe izvozvi.
Ichokwadi, hazvina kufanana mhando yerudo , asi rudo pakati peshamwari runogona kunge rwakasimba uye rwakakoshawo.
Usatya kuvaudza kuti unovada uye ita kuti vazive akakosha sei kwauri .
3. Vayeuchidze kuti zvinoshamisa sei.
Ivo vangangove vari mukuda kwakanyanya kwekuzvivimba uye kuzviremekedza.
Vaudze kuti zvinoshamisa sei. Vayeuchidze nezvehunyanzvi hwavo uye kugona kwavo. Vaudze sei uchivada .
Zvinhu zvitatu ZVISINA KUTI Utaure Kune Shamwari Yako
Zvakawanda kunge pane zvinhu zvausingafanire ita kana shamwari yako ikasangana nekurambana, pane zvimwe zvinhu zvausingafanire iti kana.
1. Usashevedze shamwari yako zvisarudzo zvisina kunaka.
Ari kunetseka zvakanyanya izvozvi.
Ivo havadi kuudzwa kuti iwe hauna kumbofarira mumwe wavo, kana kuti iwe waigara uine zvakashata kunzwa nezvavo, kana kufunga kuti maziso avo anga ari padhuze padhuze pamwechete.
Ivo havadi kuitirwa kuti vanzwe kunge benzi rekutenda manyepo kana kufunga kuti ex wavo achachinja.
unoziva sei mukadzi anokufarira
2. Usataure chero chinhu chaunodemba kana vakadzokerana.
Kana hukama hwacho hukaputsika pamusoro pechinhu chakakomba, sekushungurudzwa kwechimiro kana fomu, saka ndinovimba shamwari yako ichave yakasimba zvakakwana kuti isadzokere ipapo.
Asi chokwadi ndechekuti vanhu vanowanzo pesana pamusoro pemarudzi ese ezvinhu, uye havawanzogara vakadaro.
Ziva kuti pane zvinogara zvine njodzi yekuti shamwari yako inogona kudzoka nemunhu iyeye waari ex wavo.
Uye kana zvikaitika, haudi kuve wakavadaidza chero chinhu chakaipisisa kana kuburitsa chokwadi chekuti waigara uchivavesa zvakadaro.
Kana ukadaro, unogona kunge usiri kukokwa kuzodya kumanheru panzvimbo yavo pavanodzokerana pamwe chete…
… Uye shamwari yako zvirokwazvo haizonzwa sekunge vanogona kuvimba newe nezvehukama mune ramangwana.
3. Usataure zvakawanda.
Iwe hausi kuzombogadzirisa zvese shamwari shamwari matambudziko ako nemashoko, saka ita kuti pfungwa dzako dziteerere kune zvavanofanira kutaura panzvimbo.
Usatonge hurukuro. Ingoteerera. Chaizvoizvo teerera.
Regai vashande zvinhu kuburikidza, kutaura manzwiro avo uye kuuya kune avo mhedziso.
Zviise Iwe Panguwa Dzavo Shangu
Pane mukana wekuti iwe urikuda kukanganisa izvi. Unogona kutaura kana kuita zvisizvo kunyangwe iwe uine vavariro dzakanaka.
Uye izvo zvakanaka.
Shamwari yako inoregerera chero faux pas, uchitenda kuti uripo kwavari uye uri kuita zvaunogona.
Kana iwe usina chokwadi chechakanaka chinhu chekuita kana kutaura chiri, ingotora sekondi uye edza kuzviisa iwe mune yavo shangu uye funga izvo zvaungade kubva kushamwari dzako dai iwe uri mumamiriro avo.
Uye, kana uchikahadzika, ingo rangarira kuvapo kwavari uye kuteerera.
zviratidzo anotya manzwiro ake kwandiri
iri kuita nharo zvakanaka kune hukama
zvekutumira mukomana mukomana mushure mezuva
handina shamwari kana hupenyu hwemagariro
chii chinonzi babyface net kukosha
saini murume haakudi